Deetaa(Galmeewwan unka XML tiif)
Qindaa'inni danda'amaan fuula caancala Deetaa too'annoo kan hundaa'u too'annoo duraa duubanii. Dirqaalee too'annoo ammee fi halqaraaf jireessa ta'an qofa ilaaluu dandeessa. Dirreewwan armaan gadii jireessa:
Ilaallata deetaa XML
Ilaallata tarree ilaallatoota mara galmee ammee keessaa fili.
Maqaa jildeessaa galchi ykn fili. Maqaa jildeessa jiraataa filuun jildeessa too'annoo unkaa waliin walitti firoomsa. Maqaa haaraa galchuun jildeessa haaraa uuma; too'annoo unkaa waliin waliti firoomsa.
Yoo wanti dirqamaan Dhangii X irratti hammatamuu qabu adda baasa.
Kan waliin deemu
Wanta akka waliin deemuun ibsa.
Maalima akka dubbisqofaatti ibsa.
Wanta akka dirqamaatti ibsa.
Maalimni herreegamuu isaa ibsa.
Akaakuu deetaa kan too'annootiin gataa'essuun irra jiru fili.
Akaakuu deetaa hiikaa fayyadamaa fi cuqaasa qabduu akaakuu deetaa hiikama fayyadamaa haquuf fili.
Bakka maqaa akaakuu deetaa hiikamaa fayyadamaa haaraa galchuu dandeessutti qaaqa banuuf qabduu cuqaasi. Akaakuun deetaa haaraan akaakuu deetaa filatamaa ammee kallattii rakkoon ykn amalli itti mul'atu mara irraa dhaala.
Kan armaan gadii kallattii rakkoo ykn amallitti mul'atu mara akaakuuwwan deetaa muraasaaf jireessa tarreessa.
Lakkoofsa ida'ama guddaa lakqurxaalee kan gatiiwwan akaakuu deetaa lakkurnyee qabaachuu danda'a.
Lakkoofsa ida'ama guddaa lakqurxaawwaan entaa gatiiwwan akaakuu deetaa lakkurnyee qabaachuu danda'a.
Hammata adeemsa irraa gatiiwwaniif ifteessa.
Ofiifoo adeemsa irraa gatiiwwaniif ifteessa.
Hammata gadaanaa adeemsa gatiiwwaniif ifteessa.
Ofiifoo gadaanaa adeemsa gatiiwwanniif ifteessa.
Lakkoofsa arfiilee diraaf ifteessa.
Dheerina (xiqqaatee xiqqaatu)
Lakkoofsa xiqqaa arfiilee diraaf ifteessa.
Dheerina (irra caalatti)
Lakkoofsa guddaa arfiilee diraaf ifteessa.
Title is: Deetaa(Galmeewwan unka XML tiif)